Dib u noqoshada ikhtiyaariga ah | Maahanmuuttovirasto
Ma dooneeysaa in aad ikhtiyaarkaa ugu laabato waddankaaga hooyo? Bogagga kan waxaad ka heli doontaa dib u noqoshada ikhtiyaariga ah iyo sida loo codsado kaalmada iskaa u noqoshada ikhtiyaariga ah. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa macluumaad luqadaha soo socda: carabiga, dariga, faarsiga, kurdiga-soraaniga, somaliga, turkkiga ja ruushka.
Dib u noqoshada hadda looma diyaarin karo dalalkan soo socda: Eritrea, Yaman, Syyria, Taiwan iyo Afgaanistan. Haddii aad dooneeysid in aad dib ugu noqotid waddamadaasi, la soo xiriir Hey’adda Socdaalka Finland. Soo wac ama WhatsApp-farriin ugu sii dir lambarka 050413 8625 ama u soo dir e-mail cinwaanka [email protected]
Dalbashada kaalmada dib u noqoshada ikhtiyaariga ah
Ma tahay macamiil ka tirsan xerada qaxootiga?
La xiriir shaqaalaha xerada qaxootiga. Waxaad ka heli doontaa xaggooda macluumaad arrinkaasi ku saabsan, sidee loo soo gudbiyaa arjiga dib u noqoshada ikhtiyaariga ah. Xerada qaxootiga ayaa kuu oggolaan karta in aay ku siiso caawimaadda dib u noqoshada, haddii aad dib uga noqotid arjigaagii magangalyo doonka ahaa amaba aadba heshay go’aan magangelyo oo diidmo ah. In laguu oggolaado kharashka caawimaadda waxaa sharuud u ah, in aad si ikhtiyaar ah uga guurtid Finland. Waana in aad dib aad uga noqotaa waxwalba oo araaji ahaa oo kuu maqnaa sida arjiga magangalyada, oggolaanshaha joogitaanka ama arjiga baasaboorka ajnabiga.
Miyaad Finland ku sugan tahay adigoo bilaa sharci ah ka dib ayadoo howlihi xerada qaxootiga aay dhammaadeen?
Hey’adda socdaalka Finland ayaa kaala talin doonta sidii aad u dalban laheyd dib u noqoshada ikhtiyaariga ah. Wac ama u dir WhatsApp-farriin lambarka 050 413 8625. Waxaad sidoo kale u diri kartaa e-mail cinwaanka [email protected] Hey’adda socdaalaka Finland ayaa kuu oggolaan karta in aay ku siiso adiga kharash caawimaad ah haddii aad dalbatay magangalyo caalami ah oo Finland aad ku sugneyd adigoo bilaa sharci ah ka dib ayadoo howlihii xerada qaxootiga aay dhammaadeen. Kharashka caawimaadda waxaa kaloo loo oggolaan karaa dhibbanayaasha dadka la tahriibiyo. In laguu oggolaado kharashka caawimaadda waxaa sharuud u ah, in aad si ikhtiyaar ah uga guurtid Finland. Waana in aad dib aad uga noqotaa waxwalba oo araaji ahaa oo kuu maqnaa sida arjiga magangalyada, oggolaanshaha joogitaanka ama arjiga baasaboorka ajnabiga.
Waa maxaay kharashka caawimaadda ee aad heli kartid?
Kharashka kaalmada dib u noqoshada ikhtiyaariga ah waxeey ka kooban tahay
bixinta kharashadka safarka- iyo dib u dejinta.
deeq, kaa caawineeysa sidii aad dib ula qabsan laheyd waddankaaga hooyo.
Kaalmada ama deeqda waxeey noqon kartaa lacag kaash ah ama deeq badeecadeed. Taakuleeynta deeqda badeecadeed waxaa loola jeedaa adeegyo ama agabyo kala duwan oo kaa caawinaya, tusaale ahaan
In aad furatid ganacsi kuu gaar ah
goortaad codsaneeysid waxbarasho / tababar
kharshyada daryeelka caafimaadka.
Kaalmada ama deeqda waxaa lagu qaabeeyay baahidaada oo lagu sargooyay fursadahaaga.
Cadadka kharashka kaalmada ah waxeey ku xiran tahay waddanka aad ku noqoneeysid, wixii macluumaad dheeraad ah ka eeg bogagga kan Kaalmada dib u noqoshada ikhtiyaariga ah waddamada aay khuseeyso.
Sidee ayeey lafogurista arjigu aay u socotaa?
Xerada qaxootiga iyo hey’adda socdaalka Finland ayaa lafoguri doona arjigaaga. Go’aanka aan gaarno, waxaan tixgelin siin doonnaa xaaladda guud ee noloshaada. Waxaan tixgelin siinnaa tusaale ahaan xaaladda qoyskaaga iyo tan caafimaadka.
Xerada qaxootiga iyo hey’adda socdaalka Finland ayaa booliska ka hubin doona, in aad dib ugu noqon kartid si ikhtiyaari ah waddankaaga hooyo. Haddii boolisku uusan billaabin ka rarista dadka waddanka, oo aayan jirin caqabado kale oo ku yimaada dib u noqoshada ikhtiyaariga ah, go’aanka waxaa loo diri doonaa ururka caalamiga ah ee socdaalka IOM. IOM ayaa kula bilaabi doonta qabanqaabada dib u noqoshada.
Dib ugu noqoshada waddanka hooyo
IOM waxeey ku siin doontaa la talin xagga arrimaha dib u noqoshada, kuna bixin doontaa la talinnadaasi luqado badan, waxeeyna kuu ballamin doontaa safarka aad ku tageeysid waddankaaga hooyo. Haddii aadan heeysan baasaboor, waxaa lagaa caawin doonaa in aad ka heshid safaaradda waddankaada dokumenti aad ku safarto. Haddii aad qabtid caafimaad darro waxaa la siin doonaa mudnaan gaar ah inta lagu gudojiro qabanqaabada dib u noqoshada.
Finland gudaheeda IOM ayaa kuu diyaarineeysa:
dokumentiyada aay horay u hayeen mas’uuliyiinta Finland
halka howlshaqeedkooda lagala xiriiro, si aad kaga heshid kharashka kaalmada aad dib ugu noqon laheyd waddankaaga hooyo
Haddii laguu oggolaaday lacag kaash ah ama kaalmo deeq ah, waxaad heli doontaa 200 yuuro markaad ka baxeeysid Finland. Haddii aad leedahay ilmo ama caruur midkiiba waxaa la siin doonaa 100 yuuro.
Wareegtada wasaaradda arrimaha gudaha ee ku saabsan kaalmada dib u noqoshada ikhtiyaariga ah
Arjiga dib u noqoshada ikhtiyaariga ah iyo foomamka oggolaanshaha
Foomka arjiga (fi,ing)
Foomka oggolaanshaha (IOM) (fi)
Foomka oggolaanshaha (IOM) (ing)
Foomka oggolaanshaha (IOM) (carabi)